Tijaabada Tayada Hawada
Waa maxay nooca gaaska kaarboon monoksaydh
Gaaska Kaarboon monoksaydh waxa loo isticmaali jiray in lagu dilo Giriiga iyo Roomaanka wakhtiyadii hore. Waxaa markii ugu horreysay ku tilmaamay dhakhtar Isbaanish ah qarnigii 11aad. Sannadkii 1776, waxaa soo saaray farmashiyihii Lassone oo markii ugu horreysay ka dhigay isagoo kulul ku daray zinc cad iyo kaarboon. Kaarboon monoksaydh. Waa maxay gaasta kaarboon...
Qalabka cabbiraadda formaldehyde atmospheric si loo daboolo baahiyaha kormeerida goobta ee formaldehyde atmospheric
Dad badan ayaa yaqaan ereyga formaldehyde, gaar ahaan odhaahda ah in formaldehyde uu yahay kansar, taas oo ka dhigaysa dad badan inay ka fogaadaan formaldehyde. Formaldehyde waa gaas aan midab lahayn oo cuncun leh, kaas oo ah mid yareynaya oo guban kara. Waxa kale oo loo yaqaan aldehyde formic. 40% waxa uu ka kooban yahay...
Sida loo isticmaalo aaladda cabbiraadda formaldehyde
Qalabka cabbiraadda formaldehyde waa qalab loo isticmaalo in lagu hubiyo in formaldehyde uu ka sarreeyo heerka iyo in kale. Sidee loo isticmaalaa qalabka cabbiraadda formaldehyde? 1. Meel baadhis ah oo xidhan Way ka cilmi badan tahay in la xidho albaabbada iyo daaqadaha oo dhan in ka badan 12 saacadood. Haddii heerkulka qolku yahay l...
Halkee ku jiraa gaasta kaarboon monoksaydh?
Sida gaaska xiiqsan ee aan midab lahayn, ur lahayn, iyo xanaaqa lahayn, kaarboon monoksaydhku aad buu dhib u leeyahay. Waa in aan fiiro gaar ah u yeelano meelaha nagu wareegsan ee laga yaabo in ay soo saaraan carbon monoxide, ka hortagga oo aan ogaano sida loola macaamilo. Guud ahaan, gaasta kaarboon monoksaydh waxay u nugul tahay inay ka jiraan meelaha soo socda: 1. ...
Qalabka gaaska sunta ah iyo waxyeelada leh wuxuu ogaan karaa gaaska sunta ah guriga dhexdiisa
Qof kastaa waa inuu ka welwelaa badbaadada maalinlaha ah ee guriga. Badbaadada guriga waa muhiim, sidoo kale badbaadada guriga dibadiisa ayaa aad muhiim u ah, sababtoo ah guriga dibadiisa waxaa na raacaya waxyaabaha kiimikada ah, walxahan waxay waxyeelo u geystaan ​​jirkeena, isticmaalkoodana waa sun ...
Ogaanshaha isticmaalka iyo mabda'a shaqada ee aaladaha formaldehyde
Mabda'a shaqada ee baaraha formaldehyde Qalabka ogaanshaha formaldehyde wuxuu leeyahay mabda'a dareenka sare ee dareenka korantada. Isku darka tignoolajiyada hal-chip-ka ah iyo tignoolajiyada isgaarsiinta shabakada si loo ururiyo muunado hawo goobta la ogaado, formaldehyde ee hawadu waa nuugtaa
Sida loo doorto baaraha ku habboon formaldehyde iyo maxay yihiin mabaadi'da?
Mabaadi'da ogaanshaha ee baaraha formaldehyde waa: Mabda'a ogaanshaha ee aaladaha formaldehyde inta badan waxaa ku jira mabda'a spectrophotometry, mabda'a elektiroonigga, iyo mabda'a semiconductor. Habka spectrophotometric wuxuu leeyahay saxnaan sare, laakiin natiijada...
Saxnaanta qalabka wax qabad ee formaldehyde ee guriga ayaa hooseeya
Marka loo eego sahan su'aalo-waydiineed dhinac-dariiqa ah oo ay sameeyeen Golaha Macaamiisha ee Shenzhen, macaamiisha intooda badani waxay muujiyeen kalsoonida natiijooyinka tijaabada elektaroonigga ah ama sanduuqa tijaabada marka ay dooranayaan habka is-tijaabinta formaldehyde. Imtixaankan isbarbardhigga ah, Golaha Macaamiisha ee Shenzhen waxa ay soo iibsadeen...
Ku saabsan adeegsiga kaarboon ogsaydhsaydh ee warshadaha cuntada
Qarnigii 19-aad, waxa la ogaaday in kaarboon laba ogsaydh oo lagu buuxiyo cabitaanada ay ka dhigayso cabitaanka budh-bax iyo dhadhamin wanaagsan. Tan iyo markaas, Coke ayaa soo muuqday oo isla markiiba la wareegay suuq weyn. Qof kastaa wuu ogyahay in kaarboon laba ogsaydhku yahay gaas aan midab iyo ur lahayn. Waxay leedahay milmi gaar ah oo wat...
Hordhac Badeeco Cusub- PTH-20 Taxanaha Kaarboon Dioxide
Tani waa badeecad dhamaystiran, oo ay ku jiraan muuqaalka alaabta oo dhamaystiran, iyo sidoo kale khibrad isticmaale oo dhamaystiran. Muuqaalka badeecada oo dhamaystiran, waxaanu ku tiirsanahay qalabka hardware-ka ee ay bixiyaan silsilado sahayda badan oo korka ah si aan u dhamaystirno qalabka korjoogteynta tayada hawada ee aadka loo dhamaystiray, oo ay ku jiraan...
Xiriirka ka dhexeeya Covid-19 iyo carbon dioxide
Faafida Covid-19 awgeed, waxaan waynay saaxiibo iyo qaraabo. Intii lagu jiray cudurkii ugu horreeyay ee 2020, waxaan aragnay fiditaankiisa. Waxa uu ku dhacay tobanaan milyan oo qof in ka badan 200 oo waddan oo adduunka ah sannad gudihii. Sannadkii 2021-kii, culayska Delta wuxuu bilaabay inuu adduunka oo dhan ka dilaaco. . Sida...
Soo-jeedinta Alaabta Cusub
Si la mid ah wasakhowga hawada dibadda, wasakhowga hawada gudaha waxay sidoo kale yeelan doontaa saameyn isugeyn muddo dheer ah iyo dhaawac dhanka caafimaadkaaga ah. Dhibaatooyinka caadiga ah waxaa ka mid ah hawo-xumo, wasakhowga hawada, iyo shaqeyn xumo ee hababka qaboojinta nadiifka ah. Aqoonsiga wasakhowga hawada iyo sababaha keena waa arin aad looga soo dejiyo...
Dabaqa 5aad, Dhismaha A, No. 9, Dakan Gongye 2nd Road, Dakan Community, Xili Street, Degmada Nanshan, Shenzhen.